To mhuri yangu mudiwa uye shamwari | Apg29
To mhuri yangu mudiwa uye shamwari
Havatendi kuti vatorwa vakauya vakatora nesu. Hachisi chokwadi.
It circulates "akasiya tsamba" USA. A tsamba kutumira vavanoda vasiri vaKristu vakwanise kuwana ruzivo mazuva anouya apo kubvutwa zvinogona kuitika. Ndakagamuchira tsamba iyi kubva muverengi uyo rakashandurirwa mumutauro Swedish uye ndichaita muzviparidzire pano.
To mhuri yangu mudiwa uye neshamwari.
Mashoko ini ndinotuma riri pamusoro kubvutwa kereke ndinotenda nemwoyo wangu kwava pedyo.
13. Asi handidi, hama, kuti murege kuziva pamusoro pevaya vavete, kuti murege kuchema sevamwe vasina tariro.
14. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa uye akamukazve, saizvozvo Mwari achaunza avowo vakarara muna Jesu naye.
15. Nokuti izvi tinokuudzai neshoko raIshe, kuti isu vapenyu, tinosara kusvikira pakuuya kwaIshe, hapana vauye pamberi vaya varara.
16. Nokuti Ishe amene uchaburuka kubva kudenga ane Kurayira nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru uye nokurira kwehwamanda yaMwari, uye kutanga vakafa muna Kristu vachamuka.
17. Zvadaro isu vapenyu vakasara, tichabvutwa pamwe navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mumhepo. Naizvozvo tichava nguva dzose kuva naShe.
18. Naizvozvo kurudziranai namashoko aya.
In pakarepo, muna 1/40 chechipiri, vaya aisa hwavo uye vakagamuchira Jesu Kristu saIshe uye Muponesi zvichapfuura kubva ino, uye ichi chichaitika chero nguva. Ungaziva sei kuti chokwadi kuti wakaponeswa?
VaRoma 10: 9-10
9. Nokuti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa.
10. Nokuti mwoyo kutenda kururama; uye nemuromo unobvuma achaponeswa.
Kuenda kukereke, kushumira uye kuita zvakanaka uchaponesa iwe. Hatisi kuponeswa nemabasa akanaka, iwe vanoponeswa mabasa akanaka. Kuva "munhu akanaka" haiponesi iwe. Unofanira wabvuma Jesu seMuponesi wako. Pane magwaro mazhinji kudaro ichi. Vazhinji makanzwa pamusoro pakubvutwa "Kutorwa" uye vamwe kunyange vakafunga kana akati, "kana zvinoitika ndichaita vatendeuke kuna Kristu".
Regai nditsanangure kuti chii chiri kuda kuitika munguva pfupi iri kuuya. Kunyange zvazvo Bhaibheri rinoti kuti hatizivi zuva kana awa, zviri pachena kuti tizive mwaka uye isu tiri okupedzisira nguva pakupedzisira kwamazuva ano. Nokukurumidza, vatendi vechokwadi vachatorwa "Zvikatorwa".
Zvino zvinhu vachaenda. Munhu Anopesana naKristu achauya pachikuva uye vachiedzesera kuva zvakanaka kubatsira kuita zvose zvakanaka zvakare. Iye achasimbisa rugare chibvumirano navaIsiraeri, uye kuchava norugare nyika kwenguva pfupi nguva. Ichava unyengeri guru kwemakore matatu nehafu pamberi kutambudzika kukuru makore matatu nehafu. The rose-gore manomwe nedambudziko ... kuti ichava chakashata.
Kupira upenyu hwako kuna Jesu Kristu zvino. Bvuma Him saIshe wako uye Muponesi. Izvi tariro yako chete. Zvinosuruvarisa, uchawana kuti musoro kana vanobata iwe, asi iwe unofanira kutora mucherechedzo wechikara, kana chero yamuchapedza nokusingaperi muhero. Izvi chakakomba zvikuru.
Munhu Anopesana naKristu achava dzika nyika ine hurongwa uye mucherechedzo wechikara. hamungambovi kukwanisa kutenga kana kutengesa asina chiratidzo ichi. I zvakasimba tenda kuti zvizivikanwe zvingave RFID Chips pahuma kana kurudyi, kana nyora chero mhando kuti hazvigoni kubviswa. Ndinotendawo kuti uchachinja DNA yenyu. Kungofanana vaNefirimu, VaNefirimu engirozi yevatadzi uye vakadzi Genesis chitsauko nhanhatu vakachinja DNA yavo. Mark CHIKARA achaita zvakafanana.
The Vatican ane Lucifer chirongwa / teresikopu paGomo Graham muna Arizona mavanofanira kushumwa kuonana wavatorwa ungwaru. Havasi vatorwa. Hapana vatorwa. Vakawira pasi ngirozi.
Uye ndinofunga pane Muchiitiko simba anotsanangura sei vatendi zvichange zvisisipo uye hunganzi vatorwa kucharatidza uye tsanangura pachake kuti mukuru uchenjeri kana madzitateguru edu uye Musiki uye kuti vaifanira kubvisa vaya vakanyangarika, izvo ndivo vaKristu vechokwadi.
The kuitika Papa, Pope Francis, kana kwete nomuprofita wenhema, ndiye nhungamiri zvechokwadi. Saka ... nokukurumidza kubvutwa kuchaitika.
Usamirira. Kugamuchira Jesu zvino. Kana ukasadaro uye isu vakarasikirwa kurangarira zvandiri kugoverana. Ndinokudai, uye zvakakosha,
Jesu anokuda uye akafira imi kuti unogona kuva noupenyu husingaperi. Kana ukaona kuti uchange akasiya, taura pakarepo kuna Jesu. hamungambovi kunzvenga zvinotyisa kuti kuchauya pamusoro penyika, kana rufu, asi imi muchava nhaka yeupenyu husingaperi.
Kana iwe havabvumi Jesu uye kufa, iwe uchava vanopedza nokusingaperi muhero. Uye kana ukawana mucherechedzo wechikara, iwe vakatondeswa nokusingaperi pasina tariro. Uchava kupedza nokusingaperi muhero.
Nokuti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa.
Nokuti mwoyo kutenda kururama; uye nemuromo unobvuma achaponeswa.
Tenda muna Jesu. Bvuma chipo chemahara cheruponeso. Kumbirai uye kugamuchira Jesu ikozvino.
"Jesu, ndinoziva kuti ndiri mutadzi. Ndinotenda iwe akafira zvivi zvangu. Ndakutora saMuponesi wangu. In zita raJesu, ameni."
Ndinobvunza maropafadzo ake pamusoro pako uye kuti imi mose vanouya aponese ruzivo rwaJesu.
Tariro kusangana nemi mudenga.
Uyu muverengi email, vane maonero ndivo munyori pachake.